hazard - Synonyms of hazard | Antonyms of hazard | Definition of hazard | Example of hazard | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for hazard
Top 30 analogous words or synonyms for hazard
လက်ပံတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာ (ခ)Natural Hazard and Environmental Management
အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဌာန (မြန်မာ) ဤဌာနက GMP Good Manufacturing Practice နှင့် HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်လည်း ဆေးဝါးနှင့် အစားအသောက်များအား စိစစ်လျက်ရှိသည်။ ထိုသို့စိစစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းမှာ အရည်အသွေး စံမှီမမှီနှင့် သုံးစွဲသူအနေဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာ သုံးစွဲနိုင်သည်ကို ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဌာနမှ စားသောက်ရန် မသင့်သည့် ဆေးဝါး၊ အစားအသောက်နှင့် အလှကုန် ပစ္စည်များအား အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာလျက်ရှိသည်။
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ If it were to remain on the same trajectory as the spacecraft, the S-IVB could have presentedacollision hazard so its remaining propellants were vented and the auxiliary propulsion system fired to move it away. For lunar missions before Apollo 13, the S-IVB was directed toward the moon's trailing edge in its orbit so that the moon would slingshot it beyond earth escape velocity and into solar orbit. From Apollo 13 onwards, controllers directed the S-IVB to hit the Moon. Seismometers left behind by previous missions detected the impacts, and the information helped map the inside of the Moon.
အပိုလို ၁၁ In addition to fulfilling President John F. Kennedy's mandate to landaman on the Moon before the end of the 1960s, Apollo 11 was an engineering test of the Apollo system; therefore, Armstrong snapped photos of the LM so engineers would be able to judge its post-landing condition. He removed the TV camera from the MESA and madeapanoramic sweep, then mounted it onatripod 68 feet (21 m) from the LM. The TV camera cable remained partly coiled and presentedatripping hazard throughout the EVA.
ထွန်းလွင်၊ ဒေါက်တာ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်၊မေလ(၂၉)ရက်နေ့တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(အကြံပေးအရာရှိ)ရာထူးဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့ရာ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းအဖြစ်(၄၅)နှစ်ခန့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာထွန်းလွင်သည် ယနေ့အထိ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနစာမ်း မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်နှစ်ရပ်ပေါင်း (၈၀)ကျော်၊ ဆောင်းပါးပေါင်း(၁၂၀)ကျော်နှင့် ဟောပြောပွဲ ပြည်တွင်း(၃၀ဝ)ခန့်၊ ပြည်ပ(၄၀)ခန့် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်(၃)အုပ်ရေးသားခဲ့ရာ လာနီညာဆိုသော မိန်းကလေးနှင့် အခြား သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ သုတစွယ်စုံ သိပ္ပံစာပေဆု ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ အမှုထမ်းဘဝတွင် စက်မှုစီးပွား ဒုတိယဆင့် အပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှဆုတံဆိပ်(၅)ခု ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒေါက်တာထွန်းလွင်သည် လက်ရှိတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ AIT တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော RIMES(Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System)၏ Technical Advisor အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Consultant အဖြစ် MRCS, CARE Myanmar. Actionaid Myanmar, EcoDev, NAG တို့တွင်လည်းကောင်း၊ Resouce Person အဖြစ် ICHARM(Japan), EGRESS, World Vision Myanmar, Global Green အပါအဝင် အခြားသော LNGOs, INGOs များတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနစ်နာနိုင်မှုလျော့ပါးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရှိပါသည်။ FM ရေဒီယိုလိုင်းများဖြစ်သည့် Mandalay FM နှင့် Shwe FM တို့တွင် အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်ရာသီဥတုရေးရာဆွေးနွေးဟောပြောသူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည့် MRTV-4 တွင် အခါအားလျော်စွာ ဟောပြောသူအဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။